Ukufaka i-graphene ibe yizinhlanganisela, i-graphene kumele ihlakazeke / ihanjiswe njengama-nano-amashidi angashadile ngokufanayo ekufakweni. Ephakeme ebangeni le-deagglomeration, ngcono izindawo ezibonakalayo ezibonakalayo zixhashazwa.
Ukusabalalisa kwe-ultrasonic kwenza kube nokusabalalisa okuphezulu kwezinhlayiyana nokuqina kokuhlakazeka – ngisho nalapho kudala ukugxila okuphezulu kanye nama-viscosity.
Ukucubungula kwe-ultrasonic ye-graphene kunikeza izimfanelo ezivelele zokusabalalisa futhi kuvelele izindlela ezivamile zokuxuba ngokude.
Ukuze uboleke izingxenye ezibonakalayo ezibonakalayo ze-graphene njengezikhwepha, i-graphene kufanele ihlakazeke ibe yi-matrix noma isetshenziswe njengesembozo se-thin-film kwi-substrate. Ukuguqulwa kwamanzi, ukuguqulwa kwesidumbu, nokusabalalisa zibe matrix (noma ukusabalalisa kwezinhlayiyana ku-substrate, ngokulandelana) yizinto ezibalulekile ezithinta izakhiwo ezibonakalayo.
Ngenxa yemvelo yayo ye-hydrophobic, ukulungiswa kwe-graphene eqinile nokugxila kakhulu ngaphandle kwama-surfactants noma ama-dispersants kuwumsebenzi onzima. Ukuze anqobe amabutho e-van der Waals, amandla amakhulu e-shear akhiqizwa cavitation ultrasonic yiyona ndlela eyinkimbinkimbi kunazo zonke yokulungisa ukuhlakazeka okuzinzile.
I-Graphene ene-high conductivity kagesi (712 Sm-1), ukuhlakazeka okuhle nokuhlushwa okuphezulu kungalungiselelwa kalula besebenzisa i-disperser ye-ultrasonic, njenge I-UIP2000hdT noma UIP4000. I-Sonication ivumela ukulungisa ukusabalalisa kwe-graphene ephansi ngaphansi kwenqubo yokushisa ye-approx. 65 ° C.
Isithombe se-SEM sama-nanosheets asetshenziswe ngama-ultrasonically
Njengoba imigomo ye-sonication ingalawulwa ngokuqondile, i-ultrasonic dispersion technology igwema ukulimala kwamakhemikhali nama-crystal izakhiwo ze-graphene – okuholela ekugqibeleni ama-flaphene flakes.
Amasistimu ama-ultrasonic anamandla kaHielscher akwazi ukucubungula i-graphene ne-graphite emikhulu emikhulu, isb for exfoliation phase-phase kanye graphene ukuhlakazeka. Ukulawulwa okuqondile phezu kwemigomo yezinqubo kuvumela ukulinganisa okungazinzile kwezinqubo ze-ultrasonic kusuka ebhentshini kuya phezulu ekukhiqizeni okugcwele.
I-ultrasonically exfoliated graphene embalwa-ungqimba nge approx. 3-4 izendlalelo kanye ne-approx. ubukhulu buka-1μm bungaba (re-) buhlakazeka ezindaweni okungenani 63 mg / mL.
I-7kW i-reactor ultrasonic ye-graphene dispersions
I-Hielscher Ultrasonics inikeza izinhlelo eziphezulu zamandla ultrasonic ze-exfoliation nokusabalalisa kwe-graphene enezinhlamvu eziningi kanye ne-graphite ku-mono-, i-bi- ne-grafhene eyambalwa. Amaprosesa ase-ultrasonic anokwethenjelwa kanye nama-reactor ezinkimbinkimbi ahambisa amandla adingekayo, ukucubungula izimo kanye nokulawula okuqondile, ukuze imiphumela ye-ultrasonic ingabonwa ngokuqondile nezinhloso ezifunwayo zenqubo.
Enye yezinqubo ezibalulekile kunazo zonke yi-amplitude ye-ultrasonic (i-displacement eguquguqukayo ephondo le-ultrasonic). Hielscher's izinhlelo ze-industrial ultrasonic yakhelwe ukuletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes angafika ku-200μm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ku-24/7 ukusebenza. Nge-amplitudes ephakeme nakakhulu, i-Hielscher inikeza ama-proso ultrasonic afakwe ngokwezifiso. Zonke izinqubo ze-ultrasonic zethu zingahle zilungiswe kahle ezimweni ezidingekayo zenqubo futhi zihlolwe kalula nge-software eyakhelwe ngaphakathi. Lokhu kuqinisekisa ukuthembeka okuphakeme kakhulu, ikhwalithi ehambisanayo kanye nemiphumela ephindaphindiwe. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza komsebenzi we-24/7 emsebenzini obuthakathaka nasezindaweni ezinzima. Lokhu kwenza i-sonication ubuchwepheshe bokukhiqiza obukhethwayo bokulungiselela okuningi ama-nanosheets amancane we-mono- nambalwa amile.
Ukunikeza ububanzi bemikhiqizo yama-ultrasonicators nezesekeli (ezifana ne-sonotrodes nama-reactors anezilinganiso ezihlukahlukene kanye ne-geometries), izimo zokuphendula ezifanele kakhulu nezici (isib. Ama-reagents, i-ultrasonic energy input ivolumu ngalinye, ingcindezi, izinga lokushisa, izinga lokugeleza njll) okhethiwe ukuze uthole izinga eliphakeme kakhulu. Njengoba izinsimbi zethu ze-ultrasonic zingagonywa kuze kube yizinkulungwane ezingamakhulu ezinhlanu, i-sonication ye-pastes kakhulu ye-viscous ne-250,000 centipoise ayiyona inkinga kumahlelo we-ultrasonic ka-Hielscher.
Ngenxa yalezi zici, i-ultrasonic delamination / exfoliation nokuhlakazeka kunezici ezijwayelekile zokugaya nokugaya.
amabutho avela phezulu
izingcindezi eziphezulu ezisebenzayo
ukusabalalisa okunamandla (okulinganayo)
batch and flow-ngokusebenzisa
Ivanov R., Hussainova I., Aghayan M., Petrov M. (2014): I-Graphene Coated Alumina Nanofibres njengeZirconia Ukuqiniswa. I-9 International International DAAAM Conference of Engineering Engineering 24-26 Ephreli 2014, eTallinn, e-Estonia.
I-solvents evamile, evame ukusetshenziselwa njengesigaba samanzi ukusabalalisa ama-nanosheet, ihlanganisa i-Dimethyl sulfoxide (i-DMSO), i-N, N-dimethylformamide (i-DMF), i-N-methyl-2-pyrrolidone (i-NMP), iTetramethylurea (TMU, i-Tetrahydrofuran (THF) , propylene carbonateacetone (PC), i-ethanol, ne-formamide.
Kungani ama-Composite-Based Based Composites?
I-Graphene inebukhulu be-athomu eyodwa i-thinnest, enesisindo se-approx. 0.77 mg nge-1m2 elula kunazo zonke, kanye nokuqina okuqinile kwe-150,000,000 psi (izikhathi ezingu-100-300 ezinamandla kune-steel) kanye namandla angama-130,000,000,000 amaPascals okuyizinto eziqine kakhulu ezaziwayo. Ngaphezu kwalokho, i-graphene iyona engcono kakhulu yomshini wokushisa (ekamelweni lokushisa nge-4.84 ± 0.44) × 103 kuya (5.30 ± 0.48) × 103 I-Wm-11 · K-1) kanye ne-conductor engcono kakhulu kagesi (i-electron ukuhamba ephakeme njengo-15,000 cm2· V-1· S-1). Ezinye izici ezibalulekile ze-graphene yindawo yayo ebonakalayo ngokubamba ukukhanya ku-πα≈2.3% kokukhanya okumhlophe, nokubukeka kwayo okubonakalayo.
Ngokufaka i-graphene ibe yi-matrices, lezo zimpawu ezibonakalayo ezibonakalayo zingadluliselwa ku-composite eyabangela, enikeza ukusebenza okuyingqayizivele. Ama-composite anjalo aqinisekisiwe anika amathuba amasha wokuthuthukiswa kwezinto ezibonakalayo nezicelo zezimboni. Ngenxa yezici zayo, i-graphene ne-graphene-composites isakaze kakhulu ekusungulweni kwamabhethri asebenza kahle, ama-supercapacitors, ama-inks aqhubayo, ama-coatings, izinhlelo ze-photovoltaic namadivayisi kagesi
Amaprosesa anamandla ase-Hielscher ase-Hielscher ahambisa amabutho aphezulu okugcoba ukukhipha izingubo ukuze anqobe amabutho e-van der Waals ukuze asakaze ama-nanosheets ama-graphene ngokufanayo abe ngamatrices amaningi. Abahlakazeli be-Ultrasonic njenge- I-UIP2000hdT noma UIP16000 zisetshenziselwa ukukhiqiza izinhlanganisela ze-graphhene- kanye ne-graphene oxide-reinforced nano-composites.